निषेधाज्ञा जारी गर्न बाँकी यी चार जिल्ला जहाँ कम छ कोरोनाकाे असर - Sankalpa Khabar
1. कुन प्रयोजनका लागि कांग्रेस महाधिवेशन
2. प्रधानमन्त्री ओली प्रभु साहसँग किन भए क्रुद्ध ?
3. चिनियाँले पानी तर्काउन थालेपछि नेपालमा खतरा कम हुँदै
4. पहिरा र बाढीको अझै जोखिम छ, सतर्कता अपनाऔँ: हेलम्बु गाउँपालिका
5. सुन तोलामा ८ सयले घट्यो, आज तोलामा कति ?
6. उपत्यकामा ‘स्मार्ट लकडाउन’ लागु गर्नेबारे आज बैठक बस्दै
निषेधाज्ञा जारी गर्न बाँकी यी चार जिल्ला जहाँ कम छ कोरोनाकाे असर
३० बैशाख ०७:३१
काठमाडौं । मुलुकका अधिकांश जिल्लाले निषेधाज्ञा लागू गरी कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणको प्रयास जारी राखेका छन् । मुलुकमा अब जम्मा चार जिल्लाले मात्रै निषेधको आदेश जारी गर्न बाँकी छ । हालसम्म ७३ जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी गरी सङ्क्रमणको साङ्लो चुँडाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये सात जिल्लामा आंशिक आदेश लागू छ ।
यद्यपि सङ्क्रमणको गति भने कम हुनाको साटो बढ्दो छ । नेपालमा यही वैशाख ७ गतेदेखि आदेश जारी गरी नियन्त्रणको प्रयास भएको थियो । वैशाख १६ गतेदेखि भने आदेश जारी गर्ने क्रम तीव्र भएको थियो । एक महिनाका अवधिमा करीबकरीब मुलुक नै ठप्प हुन पुगेको छ ।
स्वास्थ्यविज्ञले यसपालिको परिवर्तित रुप गत वर्षभन्दा बढी सङ्क्रामक रहेकाले अझै केही हप्ता घरमै बसेर सङ्क्रमणको जालो तोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विवरणानुसार मनाङ, मुस्ताङ, तेह्रथुम र खोटाङले निषेधाज्ञा जारी गरेका छैनन् । यद्यपि सङ्क्रमण फैलिन नदिन प्रयास भने जारी राखिएको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
मनाङले भने वैशाख १३ गतेको निर्णयानुसार आवश्यक तयारीका साथ सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको परीक्षणलाई तीव्रता दिँदै आएकामा आजको निर्णयले अत्यावश्यक काम नपरी बाहिर ननिस्कन, जात्रा मेलालगायत भीडभाड हुने काम नगर्न र विवाहमा १५ भन्दा बढी सहभागी नहुन निर्देशन जारी गरेको छ ।
मुस्ताङले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिने अत्यावश्यकबाहेक सेवा रोकिसकेको छ । खोटाङले आदेश जारी नगरे पनि भीडभाड हुने गतिविधिमा रोक लगाइसकेको छ ।
रुकुम (पूर्व)ले पनि बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी आंशिक आदेश जारी गरिसकेको छ । उसले गाडीका हकमा जिल्लाभर नै सञ्चालनमा रोक लगाएको तथा अन्य विषयमा स्थान तोकेर आदेश जारी गरेको छ । कम सङ्क्रमित रहेको तेह्रथुमले भने अहिलेसम्म कुनै सूचना जारी गरेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल आवश्यकतानुसार निषेधको आदेश जारी गरी रोकथाममा लाग्न जिल्लालाई निर्देशन दिइसकेको र सोहीअनुसार आदेश जारी गरी कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुहुन्छ ।
मुलुकमा पछिल्ला केही दिनदेखि नौ हजारमाथि दैनिक सङ्क्रमित फेला पर्दै आएका छन् तथा मृतक तीन अङ्क देखिँदै आएको छ । मुलुकमा अक्सिजन र सिलिण्डर तथा सघन उपचार कक्ष, भेन्टिलेटर र शय्यासमेत अभाव हुँदा बिरामीको मृत्यु हुन थालेको छ ।
नेपालमा पछिले साताको विष्लेषण गर्दा संक्रमितको सङ्ख्या ५१ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । कोरोनाबाट नेपालमा ४४ भन्दा बढी जिल्ला प्रभावित भएको जनाइएको छ । भारतभन्दा नेपालमा संक्रमण र मृत्यु दर निकै बढी रहेको मन्त्रालयका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा अर्चना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
नेपालमा प्रति १० लाख ३०४ र भारतमा २४० मात्रै सङ्क्रमण दर रहेको छ । नेपालमा प्रति १० लाखमा ३.३ जनाको मृत्यु भइरहेको छ । यो भारतको भन्दा बढी हो । भारतमा २।५ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । पोजिटिभिटी दर भारतभन्दा नेपालमा दोब्बर छ । प्राप्त विवरणानुसार भारतमा २२.६ प्रतिशत पोजिटिभिटी दर रहेकामा नेपालमा ४५।१ प्रतिशत छ । नेपालमा आजदेखि सक्रिय सङ्क्रमितको संख्या एक लाख नाघिसकेको छ ।
माइक्रोसफ्टको अध्यक्षमा भारतीय मुलकी सत्या नाडेला नियुक्त
५ असार १५:२०
सिन्धुपाल्चोकमा अहिलेसम्म ७ जनाको मृत्यु
२ असार १०:१६
उपत्यकामा ‘स्मार्ट लकडाउन’ लागु गर्नेबारे आज बैठक बस्दै
६ असार ०७:५८
कोरोनाबाट कांग्रेस नेता एवं पूर्वसञ्चार राज्यमन्त्री विष्टको निधन
६ असार १०:१४
काठमाडौं महानगरले आज र भोलि ६०–६१ वर्षका व्यक्तिलाई खोप…
३१ जेष्ठ ०७:४२
आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो, स्टेसनरीदेखि हार्डवेयर पसलसम्म खुल्ने
१ असार ०९:४६
थप क्षति हुन नदिन समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्न प्रधानमन्त्रीको…
३ असार ०७:१२
विपक्षी गठबन्धन कसिलो पार्ने प्रयास
१ असार ०७:१९
प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध भक्तपुर पत्रकार महासङ्घले बुझायो ज्ञापनपत्र
६ असार १५:१५
६ असार १५:०९
६ असार १५:०३